बारेकोटको घाटबजारमा पहिलो पटक गाडी पुग्यो - Choicekhabar.com
यसैवर्ष सबै वडामा यातायातको पहुँच पुग्छ : अध्यक्ष शाह
Choicekhabar । २०७७ आश्विन २५, आईतवार १६:१० मा प्रकाशित
जाजरकोट । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाको घाटबजारमा पहिलो पटक गाडि पुगेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. २,३,४ र ५ को व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको घाट बजारमा पहिलो पटक गाडी पुगेको हो । घाटबजारमा पहिलो पटक पुगेको कुशेमालिका यातायात प्रा.ली. द्धारा संचालित भे १ ज ५८१ नम्बरको गाडी तथा चालकलाई स्थानीयहरुले फूलमाला र अविरावरण गरेर स्वागत गरेका थिए ।
जिल्लाको सबैभन्दा विकट स्थानीय तहको रुपमा रहेको बारेकोटका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समयमा यातायातको पहुँच पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले जानकारी दिए । विकास आवेग र आक्रोशमा नभई विवेकपूर्ण नीति, योजना र कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने अध्यक्ष शाहको भनाई छ । जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट कालिमाटी, सिर्के, सक्ला, लिम्सा हुँदै घाट बजार सम्म नियमित यातायात सेवा सुचारूका लागि आवश्यक प्रकिया र समन्वय भईरहेको अध्यक्ष शाहले बताए । यसैवर्ष सबै वडामा यातायातको पहुँच पुग्ने भन्दै अध्यक्ष शाहले भने “विचमा केही कठिनाईहरू छन, त्यसलाई सुधार समेत गर्दैछौं । हाम्रो दृढ संकल्प यहि हो चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सहज र सरल तरिकाबाट यातायात पहुँच जोड्ने योजना पूरा गर्छाै ।”
घाटबजार सम्म यातायातको सेवा पुगे पछि स्थानीय खुसी भएका छन । सुचारु भएको यातायात सेवा निरन्तर संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानिय बुद्धिजिवि गोरख बहादुर सिंहले बताए । नियमित र प्रभावकारी यातायातको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा सिंहको जोड छ ।